बायर्नलाई चुनौती दिँदै पेपले भने, ‘म मेसीलाई बोलाउने छु, भन कहाँ र कहिले भिड्ने?’
नेपाली पब्लिक शुक्रबार, माघ ३०, २०७७
बिहीबार राति भएको फाइनल खेलमा मेक्सिकोको टेग्रेसलाई १–० गोलले पराजित गर्दै जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखले फिफा क्लब विश्वकपको उपाधि जित्यो। यससँगै बायर्न लगातार छैटौं ट्रफी जित्ने दोस्रो क्लब बनेको छ। यसअघि स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले यो सफलता पाएको थियो।
बार्यनले बार्सिलोनाको ऐतिहासिक सफलतामा बराबरी गरेपछि बार्सिलोनाका पूर्व प्रशिक्षक तथा हाल म्यानचेस्टर सिटीका मुख्य प्रशिक्षक पेप गार्डियोलाले ह्यान्सी फ्लिकको प्रशिक्षणमा रहेको बार्यनलाई लगातार छैटौंपटक उपाधि जितेको बार्सिलोनाको टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौति दिएका छन्।
पेपले २००९ को बार्सिलोना टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि बायर्न म्युनिखलाई ठाडो चुनौती दिएका हुन्। ट्विटरबाट एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै पेपले बार्यनलाई उक्त सफलताको लागि बधाई पनि दिएका छन्।
‘यो अविश्वसनीय सफलताको लागि बायर्न परिवारलाई धेरैधेरै बधाई, क्लब विश्वकपको विजेता बनेकोमा र विशेषगरी छौटौं पटक उपाधि जितेकोमा,’ उनले भने, ‘हामी गौरवान्द्वित छौं, म गौरवान्द्वित छु। सबैलाई धेरैधेरै बधाई। विशेषगरी ह्यान्सी, खेलाडीहरुलाई।’
‘तर, म के भन्न चाहान्छु भने ह्यान्सी तपाईँको टिम लगातार छैटौं पटक उपाधि जित्ने दोस्रो टिम हो। तपाईँको टिमभन्दा पहिले त्यो सफलता पाउने त्यहाँ अर्को टिम थियो, बार्सिलोना। त्यसैले म मेसी र साथीहरुलाई बोलाउन सक्छु, हामी सातौं उपाधिका लागि खेल्न सक्छौं? भन्नुस् कहाँ र कहिले? हामी त्यहाँ हुनेछौं,’ पेपले भिडियोमा भने।
बायर्न २०२१ र बार्सिलोना २००९ बीच होला प्रपतिस्पर्धा?
पेप बार्सिलोना र बार्यनका लागि चिनिएका व्यक्ति हुन्। यो चुनौती दिँदै गर्दा उनीसँग यो खेल सम्भव गराउने शक्ति रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यी टोलीबीच १२ वर्षको ग्याप रहेको छ। बायर्नलाई त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ। यसको लागि तयार हुन सक्छ।
आफूलाई विश्व च्याम्पियन सावित गर्दैगर्दा बार्सिलोनामा रहेका खेलाडीमध्ये हालसम्म ३ जना मात्र मैदानमा खेलिरहेका छन्। २००९ मा बार्सिलोनाबाट खेलेकामध्ये लियोनल मेसी, सर्जियो बुस्केट र आन्द्रेस् इनियस्टा अहिले पनि खेलिरहेका छन्।
#बार्सिलाेना #लियाेनल_मेसी #बायर्न_म्युनिख #पेप_गार्डियोलाे
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ३०, २०७७ १३:०४
आइतबार, जेठ ३०, २०७८ १८:५३ महिला लाभान्वित हुने मौद्रीक नीति ल्याउन आग्रह
आइतबार, जेठ ३०, २०७८ १६:१० निषेधाज्ञा एक साता थपियो, उपत्यकाका प्रजिअहरुले गरे यस्तो निर्णय
आइतबार, जेठ ३०, २०७८ १४:५३ स्थगित खोप कार्यक्रम फेरी शुरु गर्दै काठमाडौं महानगर
आइतबार, जेठ ३०, २०७८ १३:३२ इजरायलको संसदमा आइतबार प्रधानमन्त्री नेतन्याहूको सरकार विरुद्ध मतदान